HomeWararka MaantaRio Ferdinand Oo Khudbad Qiiro Leh Ku Maca-salaameeyey Manchester United
12 sannadood oo uu ka mid ahaa laf-dhabarta difaaca ee kooxda Manchester United, hadda waxa uu difaacyahanka Rio Fernando iclaamiyey in uu soo gabo-gabaynayo wakhtigaas oo uu ka tegayo kooxdiisa Manchester United.
Ferdinand oo ay da’diisu tahay 35 jir, waxa uu sannadkii 2002 kaga soo biiray Manchester United kooxda Leeds United, isaga oo noqday ciyaartoygii British-ka ahaa ee ugu qaalisanaa abid, waxaanay United ka bixisay lacag dhan £29.1 million.
Ferdinand & Ferguson , Maalintii Farxada ee 2002
Waxa uu kooxdiisa u ciyaaray 454 kulan, waxaanu u dhaliyey siddeed gool, iyadoo uu kula guulaystay lix horyaal oo Premier League ah, Laba League Caps ah iyo hal Champions League oo ay Manchester United hantiday sannadkii 2008.
“Kadib 12 sannadood oo heer sare ah oo aan u soo ciyaarayay kooxda ugu wanaagsan adduunka, waxa aan go’aansaday inay hadda tahay wakhtigii ugu habboonaa ee aan ka tegi lahaa.” ayuu yidhi Ferdinand oo u waramay website-ka, 5mag.
“Waxa aan ugu biiray Manchester United anigoo rajaynaya inaan ku guulaysto horyaallo, naftayduna waligeed may qiyaasin inay helayso guulaha aan gaadhay intii aan halkan ku sugnaa. Waxa jira tilmaamo badan, inaan ka garab ciyaaray ciyaartooyo waaweyn oo ii noqday saaxiibo wanaagsan, waxaan ku guulaystay markii iigu horreysay Premier League iyo sidoo kale habeenkii habboonaa ee Moscow, kuwaas ayaa ah xusuusaha aanan waligay illoobayn.
“Duruufaha ayaan ii ogolaanin inaan idhaahdo nabadgelyo oo ahayd sida aan anigu jeclaa laakiin fursaddan ayaan uga faa’iidaysanayaa oo waxaan leeyahay Maca-salaama Ciyaartooyada, shaqaalaha iyo taageereyaasha sida aan la malayn Karin ii garab taagnaa 12 sannadood, waligayna aanan illoobi doonin. Ku guulaysiga koobabka waxa aan ku riyooyin jiray markii aan carruurta ahaa waxaanay iigu rumowday kooxdan weyn.
“Waxa aan dareemayaa caafimaad qab jidheed iyo mid maskaxeedba, waxa aan diyaar u ahay loollan cusub diyaar ayaanan u ahay wax kasta oo mustaqbalka ii laaban” ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisa qiirada leh Rio Gavin Ferdinand.